Umaka: ukuthenga | Martech Zone
Kungani Ukuxhuma Ngokomzwelo Kuzoba Okusemqoka Kule Mpumelelo Yokuthengisa Yesizini Yeholide
NgoLwesithathu, Okthoba 20, 2021 NgoLwesithathu, Okthoba 20, 2021 UThera C. Myhrvold
Isikhathi esingaphezu konyaka, abathengisi bebelokhu bebhekene nomthelela walolu bhubhane ekuthengiseni futhi kubukeka sengathi imakethe izobhekana nenye inkathi yokuthenga ngamaholide eyinselele ngonyaka ka-2021. ngokuthembekile kusitoko. Izivumelwano zokuphepha ziyaqhubeka nokuvimbela amakhasimende ekuvakasheni ezitolo. Futhi ukushoda kwabasebenzi kushiya izitolo zixakekile uma kukhulunywa ngokusevisa abathengi ngubani
Abakhangisi: Bona Lezi Zici Zokuziphatha Eziyinhloko Ekuthengeni KweBrithani
NgoLwesine, Septhemba 7, 2017 NgoLwesine, Septhemba 7, 2017 Douglas Karr
Ngabe ubonile engikwenzile lapho? Le Midwesterner isebenzise isipelingi saseBrithani sokuziphatha kunokuziphatha. Bengifuna ukufakazela wonke umuntu ukuthi ngingumuntu wezwe kanjani… noma cha. Angikaze ngiye e-United Kingdom yize nginefa laseScotland nelaseBrithani ngasohlangothini lomama wami. (Uyabona lokho? Ngikwenzile futhi!) Ok, amahlaya eceleni (doh!), Lolu olunye ulwazi oluhle oluthathwe yi-CM Brand. Ngikholwa ukuthi yilokhu
Akubanga kudala kakhulu ukuthi abathengi bebengakhululekile kangako ukufaka idatha yabo yekhadi lesikweletu online ukuze bathenge. Abazange bathembe isayithi, babengathembi isitolo, babengathembi ukuthunyelwa… bebengathembi lutho nje. Ngemuva kweminyaka, noma kunjalo, futhi umthengi ojwayelekile wenza okungaphezu kwesigamu sakho konke ukuthenga kwabo online! Kuhlanganiswe nomsebenzi wokuthenga, ukukhetha okungakholeki kwamapulatifomu we-ecommerce, ukunikezwa okungapheli kwamasayithi wokusabalalisa, kanye
NgoLwesine, Septhemba 10, 2015 NgoLwesine, Septhemba 10, 2015 UVenkat Viswanathan
Endaweni yanamuhla yokuncintisana yokuthengisa, ukunikezwa okwenzelwe wena kuhlukanisa imikhiqizo empini yokubamba ukunakwa kwabathengi. Izinkampani kulo lonke umkhakha zizama ukuletha okuhlangenwe nakho okungenakulibaleka, okwenzelwe amakhasimende abo ukwakha ukwethembeka futhi ekugcineni kuthuthukise ukuthengisa - kepha kulula ukusho kunokukwenza. Ukudala lolu hlobo lwesipiliyoni kudinga amathuluzi okufunda ngamakhasimende akho, wakhe ubudlelwano futhi wazi ukuthi yiluphi uhlobo lokunikezwa abazoba nentshisekelo kukho, futhi nini. Okubaluleke ngokufanayo ukwazi
I-Me-Commerce nekusasa leRetail
ISonto, May 25, 2014 NgoMgqibelo, ngoMeyi 24, 2014 Douglas Karr
Ukuthengisa kushintsha ngokushesha - ku-inthanethi naku-inthanethi. Ngokwesiko, izindawo zokuthengisa bezilokhu zinamamaki wenzuzo ephansi nevolumu ephezulu ukukhiqiza imiphumela yebhizinisi ebebeyidinga ukuze baphile. Sibona inzuzo engenayo ngokushesha ezitolo namuhla lapho ubuchwepheshe busheshisa ukukhula nokusebenza kahle. Izindawo zokuthengisa ezingasebenzisi inzuzo ziyafa… kepha abathengisi abasebenzisa ubuchwepheshe bangabanikazi bemakethe. Ukushintshwa kwabantu, inguquko kwezobuchwepheshe, kanye nesidingo somthengi sokwenza ngezifiso okwengeziwe